ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ဘိုလိုချီစတန်ပြည်နယ်တွင် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူ ၄ ဦးသေဆုံး၊ ၁၄ ဦး ဒဏ်ရာရ
အစ္စလာမ်မာဘတ်၊ မတ် ၂၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ဘိုလိုချီစတန်ပြည်နယ် ချာမန်မြို့တွင် မတ် ၂၃ ရက်က ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားရာ ကလေးငယ်တစ်ဦး အပါအဝင် လူ ၄ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီး အခြားသူ ၁၄ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက အနောက်ကမ်းရိုးတန်းပြင်ပတွင် ခရုစ်ဒုံးကျည် နှစ်စင်းပစ်လွှတ်
ဆိုးလ်၊ မတ် ၂၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက မတ် ၂၁ ရက်တွင် ၎င်း၏ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်း ပြင်ပတွင် ခရုစ်ဒုံးကျည် (cruise missile) နှစ်စင်း ပစ်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ စစ်တပ်က မတ် ၂၄ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
မော်လ်ဒိုက်နိုင်ငံ၌ တရုတ်နိုင်ငံ၏ Sinopharm ကာကွယ်ဆေးအား အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြု
မာလီ ၊ မတ် ၁၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
မော်လ်ဒိုက်နိုင်ငံ၌ တရုတ်နိုင်ငံ Sinopharm က ထုတ်လုပ်သော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအား အရေးပေါ်အသုံးပြုရန်အတွက် ခွင့်ပြုချက်အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း မော်လ်ဒိုက် အစားအသောက် နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန(MFDA) က မတ် ၁၅ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ကြေညာခဲ့သည်။
မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံတွင် ပြင်းထန်သည့် သဲမုန်တိုင်းနှင့် နှင်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် လူ (၆)ဦး သေဆုံးပြီး (၈၀)ကျော် ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိ
မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ Ömnögoviပြည်နယ်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၁၂ ရက်က နှင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေသည်ကို တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဦလန်ဘာတာ၊ မတ် ၁၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ ဒေသအများအပြားတွင် မတ် ၁၃ ရက်ကစ၍ ပြင်းထန်သည့် သဲမုန်တိုင်းနှင့် နှင်းမုန်တိုင်း တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ မတ် ၁၅ ရက်အထိ လူ(၆)ဦး သေဆုံးပြီး (၈၀)ကျော် ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိကြောင်း မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ အရေးပေါ်အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနက ယင်းနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ၌ COVID-19 လူနာသစ် ၁,၃၅၄ ဦး နှင့် သေဆုံးသူ ၄ ဦးရှိ
ကွာလာလမ်ပူ ၊ မတ် ၁၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
မလေးရှားနိုင်ငံ၌ COVID-19 လူနာသစ် ၁,၃၅၄ ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အတည်ပြုလူနာ စုစုပေါင်း ၃၂၃,၇၆၃ ဦးထိ ရှိလာခဲ့ကြောင်း မတ် ၁၄ ရက်တွင် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားဆင်ပွဲတော်နေ့ အခမ်းအနားကျင်းပ
ဘန်ကောက်၊မတ် ၁၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံအယုဒ္ဓယမြို့တွင် အမျိုးသား ဆင်ပွဲတော်နေ့ကို မတ် ၁၃ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ် နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဆင်များ နှင့် ၎င်းတို့၏ စားကျက်နေရာဒေသများအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ရည်ရွယ်ကာ အများပြည်သူ အသိပေးနှိုးဆော်မှုတစ်ရပ်အနေဖြင့် အမျိုးသားဆင်ပွဲတော်နေ့ကို မတ် ၁၃ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
Time for some elephant vibes at Thailand's National Elephant Day
BANGKOK, March 14 (Xinhua) -- Thumbs up... or trunks up to celebrate Thailand's National Elephant Day, as various activities were held on Saturday to raise public awareness of the conservation of elephants and their habitats.
Mahouts and elephants attend the National Elephant Day celebration in Ayutthaya, Thailand, March 13, 2021. (Xinhua/Rachen Sageamsak)
ဂျကာတာ၊မတ် ၁၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း အနောက်ဂျာဗားပြည်နယ်တွင် မတ် ၁၀ ရက် ညပိုင်းက ခရီးသည် ၆၂ ဦး တင်ဆောင်လာသော ဘတ်စ်ကားတစ်စီးသည် ချောက်ထဲထိုးကျမှုဖြစ်ပွားရာ အနည်းဆုံး လူပေါင်း ၂၆ ဦး သေဆုံးပြီး ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း အဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ဦးက ယနေ့နံနက်အစောပိုင်းတွင် အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
နယူးဒေလီ၊ မတ် ၁၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း အနောက်ဘန်ဂေါပြည်နယ်ရှိ မီးရထားလုပ်ငန်းရုံးအဆောက်အအုံတစ်ခု မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရာ မီးသတ်သမား ငါးဦးနှင့် ရဲတစ်ဦးအပါအဝင် လူ ကိုးဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက မတ် ၉ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။